Plex.Earth Timeviews wuxuu siiyaa xirfadlayaasha AEC sawirada dayax-gacmeedka ugu dambeeyay gudaha AutoCAD - Geofumadas
Plex.Earth Timeviews wuxuu siiyaa xirfadlayaasha AEC sawirada dayax-gacmeedka ugu dambeeyay gudaha AutoCAD
Nofeembar, 2019 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
Plexscape, horumariyeyaasha Plex.Earth®, oo ka mid ah aaladaha ugu caansan ee AutoCAD ee dardargelinta mashruucyada, injineernimada iyo dhismaha (AEC), ayaa la bilaabay Waqtiga 'views, oo ah adeeg u gaar ah suuqa AEC-da adduunka, kaas oo ka dhigaya Sawirrada dayax gacmeedyada oo cusboonaysiintooda la awoodi karo oo si fudud looga heli karo gudaha AutoCAD.
Iyadoo la raacayo iskaashi istiraatiiji ah oo lala yeesho Bird.i, oo ah shirkad iskudarta sawirada dayax gacmeedkii ugu dambeeyay iyo sirdoon macmal ah si loo bixiyo macluumaad qiimo leh, Plex.Earth Waqtiga wareysigu wuxuu fursad u siinayaa sawirrada dayax gacmeedyada ee uguyaraan shirkadaha bixiya suuqyada dayax gacmeedyada adduunka Teknolojiyada / DigitalGlobe, Airbus iyo Planet: waxaan soo bandhignaa nooc qiimo gaar ah leh: xirfadle kasta oo AEC ah wuxuu awood u yeelan karaa inuu si dhakhso leh u helo xogta dayax gacmeed ee saacadaha dayax gacmeedka si loo helo qorshe fiican oo bil kasta la awoodi karo ama sanadlaha Plex.Earth.
Ilaa maantadan la joogo, adeegsiga sawirada dayax gacmeedyada ayaa ku kacay kharash aad u sarreeya, daahitaanno waa weyn iyo shuruud heersare ah oo waayo-aragnimo u leh howsha iyo falanqaynta xogta. Intaa waxaa sii dheer, sawirrada dayax gacmeedyada bilaashka ah ayaa badanaa ah kuwo waqtigoodii dhammaaday, oo tayadoodu liidato oo aan had iyo jeer bixin oggolaansho ku filan oo loo adeegsado ganacsiga ama abuurista shaqooyin durugsan. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo daraasaadka dhulka, dhinaca kale, waxay u baahan yihiin joogitaan goobta, taasoo horseedaysa dib u dhacyo iyo kharashaadka abaabulka qalabka, waxayna ku xiran yihiin xayiraad kale oo suurtagal ah (cimilo aan habooneyn, aagag duullimaad la'aan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iwm.) .
Plex.Earth Waqtiga wareysigu wuxuu joojinayaa xaddidaadahaan isagoo dimoqraadiya ka dhigaya marin u helista sawirrada dayax gacmeed casriyeysan oo tayo sare leh gudaha AutoCAD, iyo ugu dhakhsaha badan meelaha kale ee CAD. Adoo helitaan sahlan oo dhakhso leh u leh macluumaadka dayax gacmeedka, xirfadlayaasha AEC waxay lahaan karaan aragtida ugu ugu casrisan ee aaggooda bartilmaameed si ay sifiican u fahmaan jawiga mashruucan, sameyaan go'aamo la ogsoon yahay oo ay ka fogaadaan khaladaadka qaaliga ah, bilowga hawsha naqshadeynta.
Intaa waxaa sii dheer, Waqti-wareysiyada ayaa u oggolaanaya shirkadaha nooc kasta oo ay yihiin inay la socdaan horumarka mashaariicdooda socda (iyo kuwa tartamayaasha), arag sida aag xiiso leh ay u rogto waqti ama u qiimeyso saameynta dhabta ah ee aafooyinka dabiiciga ah ee goobaha shaqada. .
"Toban sano ka hor, markii aan ahaa injineer rayid ah, waxaan tijaabiyey qiimaha saxda ah ee dib-u-habeeynta, taasoo igu kaliftay inaan sameeyo aalad si toos ah ugu xira AutoCAD iyo Google Earth," ayuu yiri Lambros Kaliakatsos, aasaasaha iyo madaxa shirkadda Plexscape. Hadda, Plex.Earth waxay ku jirtaa jiilkeedii afraad aragtideena weli waa isku mid: in la baabi'iyo baahida loo qabo injineerada inay deggaan goobta ujeedka fikradda iyo naqshadeynta hordhaca ah ee mashaariicdooda. Waqtiga-wareysiga ™, adeeggayaga cusub ee lacagta lagu bixiyo, ayaa ah hal talaabo oo ka sarreysa hadafkan, maadaama ay fursad u siineyso qofkii ugu horreeyay ee galaangal u leh dhammaan sawirrada dayax gacmeedyada adduunka ugu dambeeyay iyo aragtiyada qiimaha leh ee ay bixiyaan. ”
Ku saabsan Plexscape
Plexscape waa shirkad kombiyuutar ka go'an in la beddelo sida ay injineerada ugu shaqeeyaan mashruucyada Architecture, Injineerinka iyo Dhismaha (AEC), iyada oo loo marayo horumarinta xalalka hal-abuurka ah ee xiraya farqiga u dhexeeya naqshadeynta iyo dunida dhabta ah.
Plex.Earth, alaabadayada calanka, waa softiweerka ugu horreeya ee ku saleysan daruuraha oo laga sameeyay suuqa CAD iyo mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee dukaanka 'Autodesk app store'. Xalkeenna, oo markii hore lagu bilaabay 2009, ayaa waxaa isticmaala kumanaan injineerro ah in kabadan dalalka 120 adduunka oo dhan, iyaga oo u oggolaanaya inay haystaan ​​aragti buuxda oo ah 3D juqraafi ahaan goobaha mashruucyadooda dhabta ah daqiiqado gudahood, iyada oo loo marayo ka yimid Google Earth, Khariidadaha Bing iyo adeegyada kale ee khariidaynta. iyo hormuudka ah bixiyeyaasha satalaytka ganacsiga (Maxar Technologies / DigitalGlobe, Airbus iyo Planet).
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka Plex.Earth, booqo www.plexearth.com
Post Previous«Previous 15as International gvSIG Shirka - Maalinta 2
Post Next AulaGEO, waa koorsada ugu wanaagsan ee xirfadlayaasha InjineerinkaNext »